“ကျွန်မ ရှင့်ကိုကြိုက်တယ်” “ငါမှာ မိန်းမ ရှိတယ်လေ”
May 25, 2018 By Buzz Myanmar News in ဟာသ Tags: မိန်းမ, ​ကောင်မလေး, ဆေးလိပ်
ယောကျာ်းက လက်မှာဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကို ပွတ်သပ်ရင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
“ကျွန်မ ဒါတွေဂရုမစိုက်ဘူး။ ရှင့်စိတ်ကိုပဲကျွန်မသိချင်တယ်။ ရှင် ကျွန်မကိုကြိုက်လား”
ဒီအဖြေကို ကြိုတွေးမိကြမှာပါ။ ယောကျာ်း က ခေါင်းမော့ပြီးကောင်မလေးကိုသေ ချာကြည့်လိုက်တယ်။ မိန်းကလေးက အသက် (၂၄)နှစ်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုတယ်။ အရွယ်ကောင်းတဲ့အသက်အရွယ်ပါ။ အသားအရေဖြူစွတ်တယ်။ ဖျတ်လတ်သန်စွမ်းတယ်။ အရောင်တောက်ပြီးစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်ဝန်းတစုံ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့
“တကယ်လို့ ရှင်လည်းကျွန်မက သဘောကျတယ်ဆိုရင် ကျွန်မရှင်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ချင်တယ်”
စိတ်မရှည်တဲ့အဆုံးမှာ ကောင်မလေး က ဒီစကားကို ထပ်ပြောလိုက်တယ်။
“ငါ့မိန်းမကိုငါချစ်တယ်” ယောကျာ်းက ပြတ်ပြတ်သားသားဖြေလိုက်တယ်။
“ရှင် သူ့ကိုချစ်တယ်? သူ့ကိုဘယ်လိုချစ်တာလဲ? အခုလက်ရှိ သူ့ အသက်အရွယ် က အိုနေပြီ အရင်လိုကြည့်မကောင်းတော့ဘူးမလား? အဲဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီက ပါတီပွဲကို ရှင်တခါမှ မခေါ်လာရဲတာမလား ••••”
ကောင်မလေးက ဆက်ပြောသွားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောကျာ်းရဲ့အေးစက်စက်အကြည့်တွေကြောင့် စကားကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး အနည်းငယ် နှုတ်ဆိတ်သွားကြတယ်။
“မင်း ငါ့ကို ဘာတွေသဘောကျတာလဲ” ယောကျာ်းကမေးလိုက်တယ်။
“ရင့်ကျက်တယ်။ တည်ငြိမ်တယ်။ အပြုအမူတွေက ယောကျာ်းပီသတယ်။ ဂရုစိုက်တတ်တယ်။ အများကြီးရှိသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ ယောကျာ်းတွေ့နဲ့ မတူဘူး။ ရှင်ကထူးခြားတယ် ”
ယောက်ျားက ဆေးလိပ် မီးညှိရင်းမေးလိုက်တယ်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်တုန်းက ငါဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာ မင်းသိလား? ”
“ကျွန်မ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မဂရုမစိုက်ဘူး။ ရှင် ထောင်ကျဖူးလည်း အရေးမကြီးဘူး။”
“လွန်ခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်က ငါလည်း မင်းတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ယောက်ျားတွေလိုပါပဲ”
ကောင်မလေးကို ဂရုမစိုက်ပဲ ယောကျာ်းကဆက်ပြောတယ်။
“သာမန် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ။ အလုပ်လုပ်တာ အဆင်မပြေဘူး။ တနေကုန် အရက်တွေသောက် ဒေါသတွေခဏခဏထွက်။ ကိုယ့်ချစ်သူကိုလည်း ဂရုစိုက်ချင်မှစိုက်တယ် ”
“ဒါဆို ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတာလဲ” ကောင်မလေးစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။
ဘယ်အရာက ဒီယောကျာ်းကိုပြောင်းလဲသွားစေတာလဲဆိုတာ သူသိချင်လာတယ်။
“သူက အမြဲတမ်းကိစ္စတိုင်းကို အတွင်းကျကျ သိထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ ငါ့ကိုအများကြီး သင်ပြပေးခဲ့တယ်။ အရှုံးအမြတ်ကို သိပ်အလေးမထားဖို့။ မျက်စိရှေ့က ပြသာနာကို အရမ်းအလေးမထားဖို့။ လူတွေကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံတတ်ဖို့ ငါကိုသင်ပေးတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ငါကသူရှေ့မှာဆို ဘာမှ နားမလည် မသိတတ်သေးတဲ့ကလေးတယောက်လိုပဲ။ပြောရရင် အဲဒီအချိန်တုန်းကမင်းငါကိုမြင်သလိုမျိုးနဲ့သိပ်မကွာဘူးလို့ပြောရမယ်။ အဲတုန်းကတော်တော် ထူးဆန်းတာက စိတ်ဆတ် ခေါင်းမာတတ်တဲ့ငါက သူပြောတာပဲနားထောင်တယ်။ သူပြောတဲ့အတိုင်း အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသုံးမကျတာသိတော့ အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ့နှစ် နှစ်ကုန်မှာ အလုပ်က နည်းနည်း အဆင်ပြေလာခဲ့တယ်။ ငါတို့လည်း လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်”
“အဲဒီအချိန်တုန်းက တော်တော် ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာ။ နှစ်ယောက်ကို ကုတင်တစ်လုံးတည်းနဲ့ အိပ်ခဲ့ရတယ်။ အိမ်ကပစ္စည်းဆိုတာ နည်းလိုက်တာမှ သနားဖို့တောင်ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီး တစ်နှစ်ကြာမှငါ သူ့ကို ပထမဆုံးစိန်လက်စွပ် (၁)ကွင်းဝယ်ပေးနိုင်တာ။ နှစ်ဝက်ကျော်လောက် ပိုက်ဆံစုလိုက်ရတယ်။ ဒါတောင် သူမသိအောင်ခိုးစုရတာ။ သူသိရင် ပေးဝယ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့တုန်းကလည်း ဆေးလိပ် အရက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးက ဆိုးလာသေးတယ်။ ဆောင်းတွင်းဖက်ကြီးမှာလည်း ညမအိပ်ပဲ ငါ့အတွက် သူစွပ်ပြုတ် လုပ်ပေးတယ်။ အဲဒီ့အရသာမျိုးကို သူပဲလုပ်တတ်မယ် ထင်တယ်”
ယောကျာ်းက အရင်ကအကြောင်းတွေကို ပြောရင်းအချိန်ကိုသတိမထားမိလိုက်ဘူး။ အတိတ်ကအကြောင်းတွေကို မနားတမ်းပြောနေမိတယ်။
မိန်းကလေးကလည်း စကားဖြတ်ချင်ပုံမရဘူး။ ပြောသမျှကို ငြိမ်နားထောင်နေတယ်။ ယောက်ျားက နာရီကို သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာ ည(၁၀)နာရီထိုးနေပြီ။
“ဟား•• တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီလောက်မိုးချုပ်သွားတာ သတိမထားမိလိုက်ဘူး”
“အခုမင်းနားလည်နိုင်ပြီလား?။ သူ့အပေါ်သစ္စာဖောက်တဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး ငါလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လုပ်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး”
“သိပါပြီ။ ဒီလိုလူတယောက်ကို အရှုံးပေးလိုက်ရတာ ကျွန်မကျေနပ်ပါတယ်”
မိန်းကလေးက လက်လျှော့လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ခေါင်းခါရင်း ပြောလိုက်တယ်။
“ကျွန်မလည်း သူလို အရွယ်ရောက်ရင် သူ့ထက်ပိုသာမှာပါ”
“အင်းပေါ့ အဲဒါဆို ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ယောကျာ်းမျိုးရှာတွေ့မှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား? အရမ်းမိုးချုပ်နေပြီ။ ငါလိုက်ပို့ပေးမယ်။”
“ရပါတယ် ကျွန်မဖာသာပြန်လိုက်ပါမယ်” ကောင်မလေးက လက်ဟန်ပြပြီးတော့
” ပြန်သွားတော့လေ သူစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်” လို့ဆက်ပြောလိုက်တယ်။ ယောကျာ်းက တချက်ပြုံးပြီး လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။
ညအမှောင်ထဲမှာ ယောကျာ်းရဲ့အရိပ်အယောင်တွေ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးတယောက်တည်း စားပွဲဝိုင်းမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ယောကျာ်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့ တံခါးဖွင့်ပြီး အိပ်ခန်းဆီကို တန်းသွားလိုက်တယ်။ မီးဖွင့်လိုက်တယ်။ ကုတင်နားကို လျှောက်သွားပြီး ထိုင်လိုက်တယ်။
“မိန်းမရေ ဒါ (၄)ယောက်မြောက်ရှိပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ငါကို ဒီလောက် ကောင်းအောင်လုပ် ပေးခဲ့တာလဲ? အခု ငါ့ကို ကြိုက်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေပြီ။ တော်ကြာ ငါစိတ်ပြောင်း သွားနိုင်တယ်နော်။ ဘာဖြစ်လို့ငါကို ဒီလောက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးပြီးတော့ တစ်ယောက်တည်း အရင်ထွက်သွားရတာလဲ? ငါ တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေခဲ့တာ အရမ်း အထီးကျန်နေပြီကွာ”
သူ မျက်ရည်တွေကို မျိုသိပ်ရင်း ပြောနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ မျက်ရည်တွေ မထိန်းနိုင်ပဲ စီးကျလာတယ်။ တစက်ပြီး တစက် ပါးပြင်ပေါ်က စီးကျလာပြီး လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဘောင်ပေါ် ကျသွားခဲ့တယ်။ အလင်းရောင်မပြည့်ဝတဲ့ မီးရောင်အောက်မှာ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ဆုံးသွားတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ကြင်နာမှုတွေ ပြန့်နှံ့နေခဲ့တယ်။
“ကြှနျမ ရှငျ့ကိုကွိုကျတယျ” “ငါမှာမိနျးမရှိတယျလေ”
ယောကျြားက လကျမှာဝတျထားတဲ့လကျစှပျကို ပှတျသပျရငျပွနျပွောလိုကျတယျ။
“ကြှနျမ ဒါတှဂေရုမစိုကျဘူး။ ရှငျ့စိတျကိုပဲကြှနျမသိခငျြတယျ။ ရှငျ ကြှနျမကိုကွိုကျလား”
ဒီအဖွကေို ကွိုတှေးမိကွမှာပါ။ ယောကျြားက ခေါငျးမော့ပွီးကောငျမလေးကိုသေ ခြာကွညျ့လိုကျတယျ။ မိနျးကလေးက အသကျ (၂၄)နှဈ။ ငယျရှယျနုပြိုတယျ။ အရှယျကောငျးတဲ့အသကျအရှယျပါ။ အသားအရဖွေူစှတျတယျ။ ဖတျြလတျသနျစှမျးတယျ။ အရောငျတောကျပွီးစှဲဆောငျမှုရှိတဲ့မကျြဝနျးတစုံ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မိနျးကလေးတယောကျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့
“တကယျလို့ ရှငျလညျးကြှနျမက သဘောကတြယျဆိုရငျ ကြှနျမရှငျနဲ့ခဈြသူဖွဈခငျြတယျ”
စိတျမရှညျတဲ့အဆုံးမှာကောငျမလေးက ဒီစကားကို ထပျပွောလိုကျတယျ။
“ငါ့မိနျးမကိုငါခဈြတယျ” ယောကျြားက ပွတျပွတျသားသားဖွလေိုကျတယျ။
“ရှငျ သူ့ကိုခဈြတယျ? သူ့ကိုဘယျလိုခဈြတာလဲ? အခုလကျရှိ သူ့အသကျအရှယျက အိုနပွေီ အရငျလိုကွညျ့မကောငျးတော့ဘူးမလား? အဲဒါကွောငျ့ကုမ်ပဏီက ပါတီပှဲကို ရှငျတခါမှ မချေါလာရဲတာမလား ••••”
ကောငျမလေးက ဆကျပွောသှားခငျြတယျ။ ဒါပမေဲ့ ယောကျြားရဲ့အေးစကျစကျအကွညျ့တှကွေောငျ့ စကားကိုရပျတနျ့လိုကျတယျ။ နှဈယောကျစလုံး အနညျးငယျ နှုတျဆိတျသှားကွတယျ။
“မငျး ငါ့ကို ဘာတှသေဘောကတြာလဲ” ယောကျြားကမေးလိုကျတယျ။
“ရငျ့ကကျြတယျ။ တညျငွိမျတယျ။ အပွုအမူတှကေ ယောကျြားပီသတယျ။ ဂရုစိုကျတတျတယျ။ အမြားကွီးရှိသေးတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျမတှခေဲ့ဖူးတဲ့ ယောကျြားတှနေဲ့ မတူဘူး။ ရှငျကထူးခွားတယျ ”
“လှနျခဲ့တဲ့ (၃)နှဈတုနျးက ငါဘယျလိုပုံစံလဲဆိုတာ မငျးသိလား? ”
“ကြှနျမ မသိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျမဂရုမစိုကျဘူး။ ရှငျ ထောငျကဖြူးလညျး အရေးမကွီးဘူး။”
“လှနျခဲ့တဲ့ (၃)နှဈက ငါလညျး မငျးတှခေဲ့ဖူးတဲ့ယောကျြားတှလေိုပါပဲ”
ကောငျမလေးကို ဂရုမစိုကျပဲ ယောကျြားကဆကျပွောတယျ။
“သာမနျ တက်ကသိုလျဘှဲ့ရ။ အလုပျလုပျတာ အဆငျမပွဘေူး။ တနကေုနျ အရကျတှသေောကျ ဒေါသတှခေဏခဏထှကျ။ ကိုယျ့ခဈြသူကိုလညျး ဂရုစိုကျခငျြမှစိုကျတယျ ”
“ဒါဆို ဘယျလိုပွောငျးလဲသှားတာလဲ” ကောငျမလေးစိတျဝငျစားသှားတယျ။
ဘယျအရာက ဒီယောကျြားကိုပွောငျးလဲသှားစတောလဲဆိုတာ သူသိခငျြလာတယျ။
“သူက အမွဲတမျးကိစ်စတိုငျးကို အတှငျးကကြ သိထားတဲ့အတိုငျးပဲ။ ငါ့ကိုအမြားကွီး သငျပွပေးခဲ့တယျ။ အရှုံးအမွတျကို သိပျအလေးမထားဖို့။ မကျြစိရှကေ့ ပွသာနာကို အရမျးအလေးမထားဖို့။ လူတှကေိုကောငျးကောငျးဆကျဆံတတျဖို့ ငါကိုသငျပေးတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ငါကသူရှမှေ့ာဆို ဘာမှ နားမလညျ မသိတတျသေးတဲ့ကလေးတယောကျလိုပဲ။ပွောရရငျ အဲဒီအခြိနျတုနျးကမငျးငါကိုမွငျသလိုမြိုးနဲ့သိပျမကှာဘူးလို့ပွောရမယျ။ အဲတုနျးကတျောတျော ထူးဆနျးတာက စိတျဆတျ ခေါငျးမာတတျတဲ့ငါက သူပွောတာပဲနားထောငျတယျ။ သူပွောတဲ့အတိုငျး အဖွဈမှနျကိုလကျခံနိုငျခဲ့တယျ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ အသုံးမကတြာသိတော့ အလုပျကိုကွိုးကွိုးစားစားလုပျခဲ့တယျ။ အဲဒီ့နှဈ နှဈကုနျမှာ အလုပျက နညျးနညျး အဆငျပွလောခဲ့တယျ။ ငါတို့လညျး လကျထပျလိုကျကွတယျ”
“အဲဒီအခြိနျတုနျးက တျောတျော ဒုက်ခရောကျခဲ့တာ။ နှဈယောကျကို ကုတငျတဈလုံးတညျးနဲ့ အိပျခဲ့ရတယျ။ အိမျကပစ်စညျးဆိုတာ နညျးလိုကျတာမှ သနားဖို့တောငျကောငျးတယျ။ ပွီးတော့မင်ျဂလာဆောငျပွီး တဈနှဈကွာမှငါ သူ့ကို ပထမဆုံးစိနျလကျစှပျ (၁)ကှငျးဝယျပေးနိုငျတာ။ နှဈဝကျကြျောလောကျ ပိုကျဆံစုလိုကျရတယျ။ ဒါတောငျ သူမသိအောငျခိုးစုရတာ။ သူသိရငျ ပေးဝယျမှာ မဟုတျဘူး။ အဲ့တုနျးကလညျး ဆေးလိပျ အရကျကွောငျ့ ကနျြးမာရေးက ဆိုးလာသေးတယျ။ ဆောငျးတှငျးဖကျကွီးမှာလညျး ညမအိပျပဲ ငါ့အတှကျ သူစှပျပွုတျ လုပျပေးတယျ။ အဲဒီ့အရသာမြိုးကို သူပဲလုပျတတျမယျ ထငျတယျ”
ယောကျြားက အရငျကအကွောငျးတှကေို ပွောရငျးအခြိနျကိုသတိမထားမိလိုကျဘူး။ အတိတျကအကွောငျးတှကေို မနားတမျးပွောနမေိတယျ။
မိနျးကလေးကလညျး စကားဖွတျခငျြပုံမရဘူး။ ပွောသမြှကို ငွိမျနားထောငျနတေယျ။ ယောကျြားက နာရီကို သတိထားမိတဲ့အခြိနျမှာ ည(၁၀)နာရီထိုးနပွေီ။
“ဟား•• တောငျးပနျပါတယျဗြာ။ ဒီလောကျမိုးခြုပျသှားတာ သတိမထားမိလိုကျဘူး”
“အခုမငျးနားလညျနိုငျပွီလား?။ သူ့အပျေါသစ်စာဖောကျတဲ့ လုပျရပျမြိုး ငါလုပျဖို့မဖွဈနိုငျဘူး။ လုပျမှာလညျးမဟုတျပါဘူး”
“သိပါပွီ။ ဒီလိုလူတယောကျကို အရှုံးပေးလိုကျရတာ ကြှနျမကနြေပျပါတယျ”
မိနျးကလေးက လကျလြှော့လိုကျတဲ့ပုံစံနဲ့ခေါငျးခါရငျး ပွောလိုကျတယျ။
“ကြှနျမလညျး သူလို အရှယျရောကျရငျ သူ့ထကျပိုသာမှာပါ”
“အငျးပေါ့ အဲဒါဆို ဒီထကျကောငျးတဲ့ ယောကျြားမြိုးရှာတှမှေ့ာပေါ့။ မဟုတျဘူးလား? အရမျးမိုးခြုပျနပွေီ။ ငါလိုကျပို့ပေးမယျ။”
“ရပါတယျ ကြှနျမဖာသာပွနျလိုကျပါမယျ” ကောငျမလေးက လကျဟနျပွပွီးတော့
” ပွနျသှားတော့လေ သူစိတျပူနလေိမျ့မယျ” လို့ဆကျပွောလိုကျတယျ။ ယောကျြားက တခကျြပွုံးပွီး လှညျ့ထှကျလာခဲ့တယျ။
ညအမှောငျထဲမှာ ယောကျြားရဲ့အရိပျအယောငျတှေ တဖွညျးဖွညျး ပြောကျကှယျသှားခဲ့တယျ။ မိနျးကလေးတယောကျတညျး စားပှဲဝိုငျးမှာ ကနျြရဈခဲ့တယျ။ ယောကျြားအိမျပွနျရောကျတော့ တံခါးဖှငျ့ပွီး အိပျခနျးဆီကို တနျးသှားလိုကျတယျ။ မီးဖှငျ့လိုကျတယျ။ ကုတငျနားကို လြှောကျသှားပွီး ထိုငျလိုကျတယျ။
“မိနျးမရေ ဒါ (၄)ယောကျမွောကျရှိပွီ။ ဘာဖွဈလို့ငါကို ဒီလောကျ ကောငျးအောငျလုပျ ပေးခဲ့တာလဲ? အခု ငါ့ကို ကွိုကျနတေဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိနပွေီ။ တျောကွာ ငါစိတျပွောငျး သှားနိုငျတယျနျော။ ဘာဖွဈလို့ငါကို ဒီလောကျကောငျးအောငျ လုပျပေးပွီးတော့ တဈယောကျတညျး အရငျထှကျသှားရတာလဲ? ငါ တဈယောကျတညျး ကနျြနခေဲ့တာ အရမျး အထီးကနျြနပွေီကှာ”
သူ မကျြရညျတှကေို မြိုသိပျရငျး ပွောနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ နောကျဆုံးတော့ မကျြရညျတှေ မထိနျးနိုငျပဲ စီးကလြာတယျ။ တစကျပွီး တစကျ ပါးပွငျပျေါက စီးကလြာပွီး လကျထဲမှာကိုငျထားတဲ့ ဓာတျပုံဘောငျပျေါ ကသြှားခဲ့တယျ။ အလငျးရောငျမပွညျ့ဝတဲ့ မီးရောငျအောကျမှာ ဓာတျပုံထဲမှာ ဆုံးသှားတဲ့ အမြိုးသမီးရဲ့ ကွငျနာမှုတှေ ပွနျ့နှံ့နခေဲ့တယျ။
✌ မင်ျဂလာပါ 😀